ब्रत बसेको दिन गर्नै नहुने मुख्य कुरा के हो? यस्तो भन्छ शास्त्र … -
ब्रत बसेको दिन गर्नै नहुने मुख्य कुरा के हो? यस्तो भन्छ शास्त्र …
४ कार्तिक २०७५, आईतवार १४:५७ 330 पटक हेरिएको
तीजको ब्रत बसेका महिलाले ब्रत तोडेको रात सहवास गर्न हुन्छ किहुँ दैन ? धर्मशास्त्र र चिकित्साशास्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ फरक-फरक दिइएको छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा मन भगवानमा मात्र लगाउन गरिने उपवासका बेला भोजन र यौन दुबै सोच्नै नहुने विषय हुन् । चिकित्साशास्त्रले भने धर्मशास्त्रले जस्तो कडाइ गरेको छैन।
इस्लाम धर्मग्रन्थ कुरानमा पनि रमजानका अवसरमा ब्रत बसेका बेला सहवासलाई बर्जित गरिएको छ । क्रिश्चियनहरु यसमा जे गर्न पनि स्वतन्त्र छन् । बुद्ध धर्म ग्रन्थले पनि भगवानमा चित्त लगाउनले सहवास गर्नु हुँदैन भन्छ । हिन्दू धर्मशास्त्र र परम्पराअनुसार हरितालिका तीजमा ब्रत बसेका महिलाले पतिसँग सहवास गर्दैनन् र उनीहरु त्यस दिन पतिसँग सुत्दैनन् भनेको छ ।
तीजको ब्रत बसेका बेला महिलाले पतिको घर छाडेर माइतीमा बस्नुको अर्थ पनि सहवासबाट टाढै हुने उपायका रुपमा लिन सकिने वाल्मिकी क्याम्पसका उपप्राध्यापक केशवमणि घिमिरे बताउँछन् । घिमिरे भन्छन्-’उपवास बस्ने भनेकै भोक र कामवासनालाई नियन्त्रण गरेर भगवानमा भक्ति लगाउनका लागि हो, त्यसबेला सम्भोग गर्दा ब्रतको फल प्राप्त हुँदैन ।’
उनका अनुसार यौनलाई जटिल रुपमा नबुझी प्रेम अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा लिए ब्रतले कुनै बाधा गर्दैन । तर, ब्रत बसेका बेला शरीरमा पानी, ग्लुकोजलगायत क्यालोरी मात्रा कम हुने र सहवासमा धेरै क्यालोरी खर्च हुने भएकाले यसले थप कमजोर बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘तर, एकचित्तले ब्रत बस्दा शरीर फुर्तिलो र चङ्गा हुने भएकाले यौनइच्छा अझ बढ्छ । भोकै बस्दा कसै-कसैमा ज्यानमा अझ फुर्ती आउँछ,’ भट्टराईले भने ।
श्री स्वस्थानी व्रतकथा, भाग – १ (सृष्टिक्रम तथा ब्रह्माण्ड वर्णन) : मातालाई देख्ने बित्तिकै १ शेयर गरौ !
श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन,माघ ०७ गते सोमबार \_जनवरी २१ तारिखको राशिफल
भोलीबाट श्री स्वस्थानी ब्रत कथा प्रारम्भ,यसको महत्व यस्तो छ
पौष शुक्ल पूर्णिमा [श्रीस्वस्थानी पूर्णिमा]का दिन चन्द्र ग्रहण
श्रीस्वस्थानी व्रत द.एशियाकै उत्कृष्ट व्रत हो: डा.जेसिका, श्रीस्वस्थानी व्रत कथामा पीएचडी गर्ने अमेरिकी